About - Beihua polymer darran Co., Ltd.
Profile Company Dhaqanka Honor qalabka Ururka Partner
Jiaxing Beihua polymer darran Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2010 oo la caasimada ah diiwaan of 73,155 million yuan. Waa ganacsi farsmada heerka sare ah ku takhasustay soo saarka ee masterbatch pre-kala firdhiyey kala duwan. Shirkadda waxa uu ku yaalaa Jiashan Zheshang Sayniska iyo Technology Park. Waxay ku taalaa bartamaha Shanghai, Hangzhou iyo Suzhou. Waxaa jecel yahay gaadiid ku haboon, jawi ka xoogbadan, iyo dhameystiran goobaha taageeraya.
Shirkadda la shaqeeyaa Beijing University of Technology Chemical si ay u horumariyaan masterbatch wanaagsan caag pre-kala firdhiyey. Waxaa ku takhasusay xalinta dhibaatada of processing oo kala firidhsan of alaabta caag, hagaajinta deegaanka qalliinka iyo habka wax soo saarka fiican u. Waxay leedahay sifooyinka hagaajinta tayada wax soo saarka, yaraynta heerka iin wax soo saarka iyo tamar kaydsiga. Technology waxaa loo beddelaa wax soo saarka.
Waqtigan xaadirka ah, line-soo-saarka ee shirkadda la soo saarka sanadle ah oo 6,000 oo tan oo ayaa si rasmi ah la gelin wax soo saarka, waxaana la filayaa in ay si wadajir ah ula saaxiibada gudaha iyo dibaddaba u shaqeeyaan si ay u abuuraan mustaqbal wanaagsan.